Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Indiza entsha yaseCalgary eya eSeattle indiza eWestJet ngoku
Indiza entsha yaseCalgary eya eSeattle indiza eWestJet ngoku.
Inqwelomoya entsha enqumla imida ibhiyozelwa njengesitshixo kuqoqosho olutsha, ukhenketho kunye namathuba enkcubeko phakathi kweAlberta kunye nePasifiki kuMntla-ntshona.
I-WestJet yaphehlelela indlela yayo entsha yehlabathi edibanisa iCalgary kunye neSeattle okokuqala.
Ukuhamba kwe-WS3612 ethwele iindwendwe ezingama-69 kuphawule indlela yokuqala entsha ye-WestJet yokuhamba ngendlela yamazwe ngamazwe phantsi kwemigaqo-nkqubo yogonyo emitsha yaseKhanada yaseKhanada yabahambi kunye nabasebenzi.
Inqwelomoya entsha ye-WestJet edlula imida iya kusebenza kane ngeveki ukuqalisa kwaye iya kunyuka ukuya kuphindwe kabini yonke imihla ngentwasahlobo ka-2022.
namhlanje, I-WestJet, kunye noorhulumente abaphambili kunye namaqabane oshishino, baphehlelele indlela entsha yokudibanisa iindwendwe okokuqala phakathi kweCalgary kunye Seattle. Ukumka kwenqwelomoya i-WS3612 kuphawule inyathelo elibalulekileyo lokubuyela e-WestJet njengeyona ndlela yokuqala yokuqaliswa kwenqwelo moya ukusukela oko kwangaphambi kobhubhani.
“Siyavuya ukukhuthaza unxibelelwano oluthe ngqo phakathi kweCalgary kunye Seattle okokuqala ngqa kwindlela ebesele siyilindile iindwendwe zethu kunye nezixeko zombini,” utshilo uChris Hedlin. I-WestJet, uSekela Mongameli, uThungelwano kunye noManyano. "Le ndlela iza kuqinisa amakhonkco ezoqoqosho phakathi kwemimandla kwaye iza kuvuselela uqoqosho lwabatyeleli base-Alberta njengoko siqhubeka nokomeleza uthungelwano lwethu olunqumla imida ukusuka kwindawo yethu yehlabathi eCalgary."
Ukuhamba kwe-WS3612 ethwele iindwendwe ezingama-69 kuphawuliwe I-WestJetIndlela yokuqala entsha yokuhamba ngendlela yamazwe ngamazwe phantsi koRhulumente waseKhanada wemigaqo-nkqubo yokugonya yabahambi kunye nabasebenzi.
“Ukuzithemba kuhambo kuyakhula njengoko kuboniswa yimfuno yenqwelo moya yanamhlanje kwaye imigaqo-nkqubo kufuneka iguquke ukuze ixhase inkqubo yokuhamba egonywe ngokupheleleyo,” waqhubeka uHedlin. “Namhlanje sisiganeko esibalulekileyo ekuzibopheleleni kwethu ekubuyiseleni uqoqosho lwabatyeleli baseCanada kwaye sinethemba lokuba siza kuqhubeka nokubona inkqubela-phambili ekuphuculweni kwemigaqo-nkqubo yemida echaphazela amandla ondwendwe lwethu lokuhamba phakathi kweCanada ne-US ngaphandle komthungo emoyeni, njengoko. basemhlabeni.”
Iinkcukacha ngenkonzo entsha yeWestJet phakathi kweCalgary neSeattle:
ICalgary-eSeattle 4x ngeveki Novemba 4, 2021
6x ngeveki Disemba 20, 2021
1x yonke imihla Matshi 28, 2022
2x yonke imihla Ngamana 19, 2022
Seattle - Calgary 4x ngeveki Novemba 4, 2021